Amanani | June 2021
Uhlelo lokusebenza alukwazanga ukuqala kahle (0xc000007b) windows 10
Ukuthola uhlelo lokusebenza akukwazanga ukuqala kahle (0xc000007b) 0xc0000005, 0xc0150002, 0xc0000022, 0xc0000018 noma 0xc0000142 ngenkathi kuvulwa uhlelo noma i-Game ku-Windows 10. Imbangela evame kakhulu yalolu daba ukungahambelani phakathi kwezicelo ezingama-32-bit kanye no-64- kancane ngohlelo lwakho. Nakhu ukuthi ungalungisa kanjani
I-Fix driver driver iyeke ukuphendula futhi isibuyise amawindi 10
Ukuthola umshayeli we-Display kumile ukuphendula futhi useluleme, i-PC yakho ingahle ilenge okwesikhashana futhi ingaphenduli. Inkinga yenzeka lapho isici se-Timeout Detection and Recovery (TDR) sithola ukuthi ikhadi le-Graphics aliphendulanga ngesikhathi esivunyelwe, ukulungisa lokhu kukhulisa ukuphela kwesikhathi se-TDR kumhleli weRegistry
Izindlela ezi-7 zokulungisa windows 10 isikrini esimnyama ngesikhombisi ngemuva kokungena ngemvume ngo-2021
windows 10 isikrini esimnyama esinezikhombisi ngemuva kokungena ngemvume noma ngaphambi kokungena ngemvume, Windows 10 I-PC inamathele esikrinini esimnyama ngesikhombisi esicwayizayo ikakhulu ngenxa yokukhishwa kwe-Display Driver ((ayihambisani ne-windows version yamanje, Yonakele, iphelelwe yisikhathi). Imodi bese ufaka kabusha i-Display / Graphics Driver
Iphutha 0x803F8001 I-Paint 3D okwamanje ayitholakali ku-Windows 10
ngenkathi izama ukuvula iPaint 3D, ikhafula iphutha ithi 'Hlola i-akhawunti yakho. I-Paint 3D okwamanje ayikho ku-akhawunti yakho. ' futhi inika ikhodi yephutha 0x803F8001.Isizathu esikhulu saleli phutha ukuvumelanisa inkinga phakathi kwe-akhawunti ye-Microsoft nedivayisi yakho. mane ufake i-akhawunti yakho futhi ubheke ukuthi inkinga ixazululiwe yini
Isistimu nememori ecindezelwe Ukusetshenziswa kwediski ephezulu kumawindi 10
Ngabe uqaphele ukuthi i-100% Disk Use by System and Compressed Memory futhi ngenxa yalokhu Windows 10 Uhlelo aluphendulanga? Ukulungisa isistimu nokusetshenziswa komemori okucindezelwe ukusetshenziswa okukhulu kwediski, ukusetshenziswa kwe-CPU okungu-100% Shintsha usayizi wefayela we-paging wawo wonke amadrayivu abuyela kokuzenzakalelayo, Khubaza Isistimu Nememori Encindezelwe kusuka kusihleli somsebenzi
I-Windows exazululiwe ayikwazi ukuthola inkinga efanelekayo yomshayeli wokuphrinta
Lapha sibhale izixazululo ezimbili ezisize abanye abasebenzisi ukuxazulula iWindows abakwazi ukuthola inkinga efanelekayo yomshayeli wephrinta kumawindi 10, 8.1 no-7.
Ngabe uqaphele ukuthi i-100% Disk Use by System and Compressed Memory futhi ngenxa yalokhu Windows 10 Uhlelo aluzange luphendule? Ukulungisa isistimu nokusetshenziswa komemori okucindezelwe ukusetshenziswa kwediski ephezulu, ukusetshenziswa kwe-CPU okungu-100% Shintsha usayizi wefayela lokumatanisa lawo wonke amadrayivu abuyela kokuzenzakalelayo, Khubaza Isistimu Nememori Encindezelwe kusuka kusihleli somsebenzi
Windows 10 Ukukhanya Kwasebusuku Akusebenzi Ngemuva Kokuvuselelwa? Nakhu ukuthi ungayilungisa kanjani
yehlulekile ukuvula isici seLight Night njengoba sempunga kuzilungiselelo zokubonisa, Nazi izixazululo ngokushesha Lungisa Izinketho Zokukhanya Kwasebusuku Ziphume ngaphakathi Windows 10
3 Izixazululo zokulungisa “Isakhiwo Sediski Sonakele futhi Asifundeki” ku-Windows
Indawo ayitholakali, Isakhiwo seDiski sonakele futhi asifundeki, kusho ukuthi i-hard drive yakho noma idivayisi ye-USB yonakele, inesakhiwo sediski esingafundeki.
Ungazilungisa kanjani izinkinga zokuxhumeka kwe-inthanethi kumawindows 10 (9 solutions to fix)
Windows 10 i-inthanethi ayisebenzi noma i-WiFi ayixhunyiwe kepha akukho ukufinyelela kwe-inthanethi noma ilaptop evame ukulahlekelwa ukuxhumeka kwe-inthanethi? Nakhu ukuthi ungayilungisa kanjani inkinga
windows 10 I-Laptop isebenza ngokunensa ngemuva kokuvuselelwa? Nakhu ukuthi ungayenza kanjani ngokushesha
Windows 10 Ukugijima kuhamba kancane? Ufuna ukwenza ukusebenza kwewindows 10 ukwenza windows 10 isebenze ngokushesha? Okokuqala hlola igciwane, ukutheleleka kwe-malware, Khipha Izicelo Ezingadingeki, Khubaza izinhlelo Zokuqalisa, Izinhlelo Zokuqalisa Ezingemuva, Imiphumela Ebonakalayo Nezithombe, Hlela Uhlelo Lokusebenza Lokusebenza Okuphezulu, Lungiselela Imemori Ebonakalayo njll.
Yini iWindows.OLD nokuthi Ungayisusa kanjani ifolda kumawindi 10 1903
Uma ujabulile nge-Current windows upgrade Version 1903, Lapho-ke Ungasusa Kalula Ifolda yeWindows.old usebenzisa Ithuluzi Lokuhlanza Idiski Ukuze Ukhulule Isikhala Sediski
Asikwazi ukuthola ikhodi yephutha lekhamera yakho 0xa00f4244 (0xC00DABE0)
Ukuthola Iphutha asikwazi ukuthola ikhodi yephutha lekhamera yakho 0xa00f4244 (0xC00DABE0) noma 0xa00f4244 (0xc00d36d5) leli phutha kungaba isoftware elwa namagciwane evimba ikhamera yewebhu noma ikhamera. Noma kungaba inkinga yomshayeli we-webcam. Vele ukhubaze isoftware Yezokuphepha, Phinda ufake umshayeli we-webcam Qiniseka ukuthi izinhlelo zokusebenza zivunyelwe ukusebenzisa ikhamera yekhompyutha
5 izixazululo ezisebenzayo ukulungisa iphutha Err_connection_reset ku-Chrome
Ukusethwa kabusha kwe-Err_connection_reset kwenzeka kaningi lapho iwebhusayithi ozama ukuyivakashela ingenakukwazi ukuqala ukuxhumana nendawo okuya kuyo. lapha ungayilungisa kanjani
Inkinga Yokukhipha Idivayisi Yesitoreji Esikhulu se-USB le divayisi okwamanje iyasebenza
Ukuthola Iphutha Inkinga Ukukhipha Idivayisi Yesitoreji Esikhulu se-USB 'Idivayisi le divayisi okwamanje iyasetshenziswa' Ngenkathi uzama ukususa ngokuphepha idivayisi ye-USB. leli phutha lisho ukuthi idivayisi ye-USB ozama ukuyikhipha iyasetshenziswa njengamanje. Futhi Ukuvikela idatha yakho nedivayisi yakho, isistimu iyamisa ukukhishwa. Nakhu ukuthi ungakulungisa kanjani lokhu
Lungisa amawindi wedivayisi ye-boot engafinyeleleki ye-BSOD, Bug Check 0x7B
Ukuthola iphutha lephutha le-BSOD yedivayisi yokuqala? Ngenxa yaleli Phutha Lesikrini Esibomvu IWindows Iqala Kabusha futhi yehluleka ukuqala ngokujwayelekile? Ngokuvamile, leli phutha (INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE) Ukuhlolwa Kweziphazamisi 0x0000007B kukhombisa ukuthi i-OS ilahlekelwe ukufinyelela kwedatha yohlelo noma ukwahlukaniswa kwama-boot ngesikhathi sokuqala.
Ukuthola iphutha lephutha le-BSOD yedivayisi yokuqala? Ngenxa yaleli Phutha Lesikrini Esibomvu IWindows Iqala Kabusha futhi yehluleka ukuqala ngokujwayelekile? Ngokuvamile, leli phutha (INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE) Ukuhlola isiphazamisi 0x0000007B kukhombisa ukuthi i-OS ilahlekelwe ukufinyelela kwedatha yohlelo noma ukwahlukaniswa kwama-boot ngesikhathi sokuqala.
Izici ezintsha eziyi-15 kumawindi we-10 Ephreli 2018 i-Version 1803
amawindi we-10 Ephreli 2018 i-v1803 isilungele ukukhishwa ngezici eziningi ezintsha, njenge-Timeline, i-Nearby Share, i-Focus assist, inketho yokuthola iphasiwedi yama-akhawunti wasendaweni, ukubhangqwa kwe-Bluetooth esheshayo nokuthuthuka okwengeziwe ku-Microsoft Edge, izilungiselelo zobumfihlo, i-Cortana Notebook , Uhlelo lokusebenza lwezilungiselelo, nokunye okuningi.
Kuxazululwe: Iphutha le- 'Uxhumano lwakho Aluyimfihlo' ku-Google Chrome
uma uthola iphutha le-Chrome ukuxhumana kwakho akuyona inetha elizimele :: i-err_cert_common_name_ ayivumelekile Idethi nesikhathi nesikhathi nesifunda kusizo oluzenzakalelayo
[Lungisa] Izinhlelo Ezilahlekile Ngemuva kokuvuselelwa kwakamuva kweWindows 10
Ngemuva kokufaka Windows 10 Abadali Bokuwa Buyekeza ezinye izinhlelo zokusebenza azitholakali ku-Start Menu kwamanye amadivayisi. Izinhlelo zokusebenza ezingekho azisaphinwa kwimenyu yokuqala, futhi azikho kuhlu lwezinhlelo zokusebenza. Futhi ukusesha uhlelo lokusebenza olulahlekile uCortana akakwazi ukulithola futhi ungikhomba eSitolo ukuze ngilufake. Kepha iSitolo sithi uhlelo lokusebenza selivele lifakiwe.